Tag: ahia kalenda | Martech Zone
Tag: kalenda ahia
Zymplify: Ahịa dị ka Ọrụ maka obere azụmaahịa
Tọzdee, Septemba 14, 2017 Tọzdee, Septemba 14, 2017 Douglas Karr
Mmepe mmepe, usoro, na njikọta na-aga n'ihu itinye nyiwe n'ahịa na-enye plethora nke atụmatụ na obere ụgwọ kwa afọ. Zymplify bụ otu n'ime nyiwe ndị ahụ - igwe ojii ahịa ahịa nke na-enye atụmatụ niile dị mkpa maka obere azụmaahịa iji dọta, nweta, na ịkọ akụkọ banyere ịntanetị. Agbanyeghị, ọ na-eme ya maka ihe na-erughị ọtụtụ nyiwe akpaaka ahịa ndị ọzọ na ahịa. Site na saịtị: Zymplify bụ
Thursday, September 14, 2017 Thursday, September 14, 2017
Usoro Dị Iche Iche 14 Jiri Aka Na-erekwa Ahịa Ahịa
Amaghị m ihe kpatara ndị ahịa na-eche na a kpaliri ha ime ka ha nwee okwu nke ha maka ihe niile… mana anyị na-eme ya. Ọ bụ ezie na nyiwe akpaaka nke ahịa nwere atụmatụ dabara adaba, nke ọ bụla n'ime ndị na-eweta akpaaka na-ewu ewu na-akpọ nke ọ bụla ihe dị iche. Ọ bụrụ na ị na-enyocha nyiwe, nke a nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya ka ị na-elegara atụmatụ nke otu na nke ọzọ anya n'eziokwu, otu atụmatụ niile dị. Mgbe ụfọdụ, ọ na-ada ka
Kalenda Ahịa 2013 Email
Monday, August 5, 2013 Satọde, Ọgọstụ 3, 2013 Douglas Karr
Ndị enyi anyị na ExactTarget ebipụtala nnukwu infographic nke na-akọwa ụbọchị maka ụlọ ọrụ ọ bụla - ọkachasị ndị na - ere ahịa - iji kwadebe ụfọdụ mkpọsa. Imu n'anya ahịa… na ezumike ahịa bụ eze! Nke a bụ mpaghara nke isi ụbọchị maka United States na 2013 niile: Laborbọchị Ndị Ọrụ - Septemba 2 (Mọnde) Daybọchị Columbus - Ọktọba 14 (Mọnde) etebọchị Ndị Ochie - Nọvemba 11 (Mọnde) Oge Ekele - Nọvemba 28 (Tọzdee) Christmasbọchị Krismas - Disemba 25 (Wednesday) Iji
Monday, August 5, 2013 Saturday, August 3, 2013